မော်နီကာဆန် | | အကြံပေးချက်များ
သင်၏နောက်အားလပ်ရက်ကိုပြင်ဆင်နေပါသလား။ အချိန်ဇယားကိုစိတ်ပူစရာမလိုဘဲ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆက်ကပ်အပ်နှံရန်ရက်အနည်းငယ်သာယူခြင်းသည်စုစုပေါင်းလွတ်လပ်မှုဖြင့်တစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့လွတ်လပ်စွာသွားနိုင်ခြင်းသည်အံ့သြဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်၎င်းတို့ကိုအသုံးချရန်သင်ဆုံးဖြတ်လျှင် ခရီးသွားနေသည်.
ပြီးတော့ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပြောတာကမင်းကအများသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုသွားမလား၊ ဒါမှမဟုတ်ဆန့်ကျင်ဘက်မှာကားငှားရမ်းတဲ့ကုမ္ပဏီကိုသွားမလားစဉ်းစားပြီးပြီလား။ အမှန်တရားမှာဘတ်စ်ကားများ၊ တက္ကစီများနှင့်အခြားသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုထူးဆန်းသောပြproblemနာမှလွတ်မြောက်စေနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အားလပ်ရက်ဖြစ်သဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အနည်းဆုံးစိတ်ဝင်စားသည့်အချက်မှာနာရီကိုကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကားငှားရန်သင့်အားတိုက်တွန်းပါသည်။ သိရန်ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ သင်၏ကားငှားရမ်းခတွင်ငွေစုပုံနည်း.
2 နိမ့်ရာသီအတွက် Reserve
6 အပိုဆောင်းအင်္ဂါရပ်များ? ရပါတယ်ကျေးဇူးပါ!
7 သင်မပြန်မီ ကျေးဇူးပြု၍ ဆေးပေးပါ
ဒီနေ့ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးရှိတယ် ကားငှားပါဝမ်းနည်းစရာမှာအားလုံးသည်“ စင်ကြယ်သောဂျုံ” များမဟုတ်ကြပေ။ စာချုပ်တွင်သင်မြင်တွေ့ခဲ့သည့်အရာများထက်သင့်အားပေးချေရန်ကြိုးစားသူအချို့ရှိပါသည် သင့်ကိုယ်သင်ကောင်းစွာအကြောင်းကြားရန်နှင့်ပုံနှိပ်ထားသောစာလုံးပင်ကိုဖတ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဤသဘောမျိုးဖြင့်လောင်စာဆီမူဝါဒအလွတ်နှင့်အထူးဂရုပြုရမည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကသူငယ်ချင်းအချို့သည် Mallorca သို့ရောက်လာကြပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်ကားငှားရမ်းခဲ့ရသည်။
မေးခွန်းကတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုကားကိုတင့်ကားအပြည့်ဖြင့်ပြန်လာရမယ်၊ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပေးလိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပဲပြောခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းကိုပြန်ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့အားပေးဆပ်ရန်အမိန့်ပေးသည့်အခါ (ကား၏ကုန်ကျစရိတ်ထက်နှစ်ဆ) ကျွန်တော်တို့အားလုံးအံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။ သောကြောင့်, ကျွန်တော်ငှားရမ်းခကို ၄ ရက်၊ ဓာတ်ငွေ့နှင့်«အပို»အတွက်ပေးခဲ့သည်။ စုစုပေါင်း - 200 ယူရိုခဲ့ကြသည်။
ဤကုမ္ပဏီများကသို့မဟုတ်မည်သည့်အားဖြင့်လှည့်ဖြားခြင်းကိုဘယ်တော့မှမ။ တစ်ခါတလေ၊ အဆိုပါစျေးပေါစျေးကြီးနိုင်ပါတယ်.
ဟိုတယ်မှာရက်အနည်းငယ်သုံးဖို့ကြိုတင်မှာကြားထားသည့်အချိန်တွင်ရာသီဥတုအနိမ့်ပိုင်း၌သင်လိုချင်သည့်ကားကိုကြိုတင်မှာယူရန်အကြံပေးသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် BeneluxCar ငှားရမ်းထားသောကားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုသင် သုံး၍ ခရီးမထွက်မီလအနည်းငယ်အလိုတွင်သင်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ၂၀% အထိသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ် ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ရတာအရမ်းကောင်းတယ်မဟုတ်လား။
ပုံ - Mygool.com
ပုံမှန်အားဖြင့်၊ သင်ကားငှားမည်ဆိုပါကကုမ္ပဏီတွင်စံချိန်မှီအာမခံများပါရှိသည်။ ဒီဂိမ်းကယူရို ၃၀၀ နဲ့ ၂၀၀၀ ကြားမှာရှိတယ်၊ ကားကခြစ်ရာဒါမှမဟုတ်တခြားပျက်စီးမှုတွေနဲ့အဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင်စျေးပိုကြီးလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်, သင်၏ကုမ္ပဏီမှာမေးမြန်းသင့်ပါတယ် ဤပိုလျှံမှုကိုသင်မည်သို့ပယ်ဖျက်နိုင်မည်နည်း၊ ထို့ကြောင့်အန္တရာယ်နှင့်ပြည့်စုံသောအာမခံစာချုပ်ကိုမည်သို့ရရှိမည်နည်း၎င်းသည်စျေးကြီးသော်လည်းသင့်အားလပ်ရက်ကိုပျော်ရွှင်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ဒါအရမ်းအရေးကြီးတယ် အကယ်၍ သင့်တွင်ခရက်ဒစ်ကဒ်မရှိပါကသင်သူတို့တောင်းသောငွေပမာဏကိုငွေသားဖြင့်မပေးပါကသူတို့သည်သင့်ကိုကားမပေးပါ (၁၀၀ မှ ၁၀၀၀ ကြား) ။ ဤသည်မှာကုမ္ပဏီများမှအာမခံချက်တစ်ခုအဖြစ်သိမ်းဆည်းထားသောငွေဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သူတို့သည်ကားကိုသူတို့ထံပြန်လာကြလိမ့်မည်။
ကြိုတင်မှာကြားထားခြင်းမပြုမီသူတို့မည်သည့်ပမာဏပေးရမည်ကိုကုမ္ပဏီနှင့်စစ်ဆေးပါ။ သင်သည်ဒုက္ခကိုခံရလိမ့်မည် ။
ကားငှားရမ်းသောကုမ္ပဏီများသည်ပြိုင်ဆိုင်မှုပိုများလာသည်။ ထို့ကြောင့်ယာဉ်ပျက်စီးမှုကိုတွေ့မြင်ပါက၎င်းကိုငှားရမ်းခဲ့သည့်နောက်ဆုံးလူကိုကောက်ခံသည်မှာမကြာခဏဖြစ်သည်။ မင်းကိုဒီလိုဖြစ်ပျက်မှုမှကာကွယ်ရန်, ဒါကြောင့်စစ်ဆေးရန်အဆင်ပြေသည်အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲကုမ္ပဏီသည်သင့်အားဘာမှမတောင်းခံနိုင်အောင်ဓာတ်ပုံအားလုံးကိုရိုက်ပါ။
စကားမစပ်၊ ၎င်းကိုသင့်အားပေးအပ်သည့်အခြေအနေအတိုင်းပြန်ပေးရန်မမေ့ပါနှင့်။ ဤသည်နောက်ဆုံးမိနစ်ပြproblemsနာများ၏အန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားပါလိမ့်မယ်။
အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်ခံရနိုင်သည့်ထိုကဲ့သို့သော GPS ကဲ့သို့သော add-ons အချို့ရှိပါသည်။ လောလောဆယ်တွင် GPS မရှိသောစမတ်ဖုန်းမရှိသေးပါ သင်၏မိုဘိုင်းကိုယူဆောင်လာပါကသင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်ငွေပမာဏကိုစုဆောင်းနိုင်သည် တင်။ သင်၏ပရိုဆက်ဆာအားယူရန်မမေ့ပါနှင့်၊ ၎င်းပရိုဂရမ်များသည်ဘက်ထရီများစွာလိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည်အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ဖြစ်ရန်။
သင်မပြန်မီ ကျေးဇူးပြု၍ ဆေးပေးပါ
၎င်းကိုသင့်အားပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြရန်သို့မဟုတ်စာချုပ်တွင်သတ်မှတ်ခြင်းမပြုသော်လည်း၊ ကားကိုသန့်ရှင်းစွာပို့ဆောင်ရန်အလွန်အကြံပေးသည်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သူတို့ကသင့်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေမှာမပို့ပေးနိုင်တာကိုသင့်ကိုပေးလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်တောက်ပနေစေရန်မဟုတ်ဘဲအတွင်းနှင့်အပြင်နှစ်ခုလုံးကိုကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုနိုင်ရန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းထက်ဖြစ်သည်။
ငါပေးချင်တဲ့နောက်ဆုံးအကြံဥာဏ်ကတော့ သင်၏ဥစ္စာကဲ့သို့ယူပါ။ ကျန်ရှိသောအညစ်အကြေးများကိုစီးကရက်ဘူးများ၊ သကြားလုံးစက္ကူများမှမစွန့်ပစ်ပါနှင့်။ ဒါကြောင့်အငှားကုမ္မဏီကိုမသွားခင်မှာသွားဖို့ဓာတ်ဆီဆိုင်ကနေရပ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » အကြံပေးချက်များ » ဤအားလပ်ရက်များကိုသင့်ကားငှားရမ်းခြင်းတွင်သိမ်းဆည်းပါ
ဥရောပ၌6စျေးပေါသောနေရာများ